2020 CHINA NEW PLSA Na Nanjing
Nke anọ, Nọvemba, 2020, Maazị PETER FRANZ, onye isi injinia nke teknụzụ na R&D nke Grace, nyere nkesa teknụzụ magburu onwe ya na "Frontier Energy-saving Technologies na Development Trends nke Plastic Pipe n'ichepụta" na pịa ogbako na Hall 5 nke Nanjing International Expo Ce ...
Gwa Manitowoc na ulo oru ubochi zuru ụwa ọnụ ma kwuo maka ọdịnihu ọnụ!
N'ụtụtụ nke Septemba 3, Maazị Lei Wang, onye isi oche ndị isi nke Manitowoc Tower Machinery Business Emerging Markets na Onye isi ala nke mpaghara China, a kpọrọ ndị otu ya ka ha gaa leta Grace. Ndị otu abụọ a nwere nghọta miri emi na ịnụ ọkụ n'obi na nrụpụta na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị elu ...
Teknụzụ ọhụrụ, Plastics na-egosipụta ọdịnihu!
Na 3th Septemba, 2020, onye isi injinia Mr.PETER FRANZ si Germany nabatara Grace Machinery. Na 37 afọ ahụmahụ na plastic extrusion technology R & D na imewe management, Mr. Peter FRANZ jere ozi na R & D na onye njikwa ahịa nke DROSSBACH (Germany), dị ka onye isi njikwa Batten ...
1600mm Pee Pipe Extrusion Line
Nso nso, na 1600mmPE anwụrụ mmepụta akara ọma malitere na ndị ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na efehe stably. Onye ahia ahụ kwuru okwu nke ọma na ọrụ aka nke ndị ọrụ injinia Grace! Kemgbe ọtụtụ afọ nke ahụmịhe bara uru, Grace amalitela ma p ...
GRACE 630mm & 1200mm Pee Pipe Extrusion Lines na-akwado nke ọma site na Companylọ Ọrụ Ọchịchị maka Industlọ Ọrụ Mmepe (SCCI) / Mịnịstrị nke Ahịa nke Iraq
Ndeewonu! GRACE 630mm & 1200mm Pee Pipe Extrusion Lines kwadoro nke ọma site na Statelọ Ọrụ Ọchịchị maka Industlọ Ọrụ Mmepe (SCCI) / Mịnịstrị nke Ahịa nke Iraq! Nke a bụ nnukwu ọrụ nke Ngalaba Mmepụta nke Iraq. Maazị Manhal Aziz Al Khabaz, Mịnịsta nke Mịnịstrị ...
site ha na 20-02-28
Ngosipụta ngosipụta: INTERPLASTICA bụ ụlọ ọrụ Dusseldorf Exhibition, bụ ụlọ ọrụ ihe ngosi German ama ama na ụlọ ọrụ ngosi plastik, ma Ministry of Industry and Energy nke Russian Federal Government, Ministry of Education and Scie na-akwado ya. .
site ha na 20-01-21
Banyere ihe ngosi ahụ Egyptianlọ Ọrụ International International Plastics Industry Exhibition (PLASTEX) hiwere na 1993 ma kwadoro ya ACG-ITF, onye nhazi ihe ngosi kachasị ukwuu na mba Africa-Middle East, wee nweta nkwado siri ike site na mkpakọrịta ụlọ ọrụ plastik mpaghara. Ọ bụ onye kasị ukwuu na ...
1200mm Pee Pipe extrusion Line
site ha na 19-10-16
Ofesi ahịa ahaziri 630-1200mm HDPE pipe extrusion mmepụta akara e ọma ọma na-agba ọsọ na GRACE ogbako! Extruder: nakweere ike ndọda mita dosing njikwa, arụmọrụ na-arụ ọrụ dị elu na gbọmgbọm, igbe dị oke oke ibu Siemens gear igbe; Agụụ mmezi tank: iji naịlọn efere, ...
Ekele diri GRACE's Strategic Cooperation with OPW
site ha na 18-12-25
Ndị otu niile kwenyere ịrara onwe ha nye na imekọ ihe ọnụ na mbara ala plastik, karịsịa na nkwonkwo nkwonkwo nke igwe pụrụ iche. Ekwesiri ighota na GRACE aburula onye China bu plastic extrusion machine coo ...
site ha na 18-12-21
Naanị mgbe ememme Ememme China gasịrị, ndị otu injinia Grace debugging etinyela aka na nbipu. Na nso nso a, debugging engineer Mr. Wang Lei gara Iran maka ihe ịga nke ọma debugging na mụ na-agba ọsọ 3 n'ígwé OD800mm Pee anwụrụ mmepụta akara. Ahịa highl ...
GRACE Ebinyere Aka na Nkwado Igwe na Radius Systems
N'oge na-adịbeghị anya, Grace bịanyere aka na nkwekọrịta nkwado dị mkpa na Radius Systems. Emere nkwado mmekọrịta ahụ na ebumnuche nke ịmekọrịta mmekọrịta miri emi na mpaghara mmegharị plastik, na teknụzụ ndị na-agbanwe agbanwe na-eme ka mmepe ụlọ ọrụ ahụ kwalite. Dịka onye nrụpụta ...
Nkwado Strategic na OPW
site ha na 18-11-21
Ndị otu niile kwenyere ịrara onwe ha nye na imekọ ihe ọnụ na mbara ala plastik, karịsịa na nkwonkwo nkwonkwo nke igwe pụrụ iche. Ekwesiri ighota na GRACE aburula onye oru China nke kari extrusion bu onye oru na OPW zuru uwa. Obi dị anyị ụtọ ịkọrọ gị na G ...